Muxuu Yahay Ganacsadaha 50-ka Maalmood ku Xidhan Hargeysa? | Gaaroodi News
Muxuu Yahay Ganacsadaha 50-ka Maalmood ku Xidhan Hargeysa?
Cabdimanaan Yuusuf Maxamed, oo ah maamulaha Warbaahinta Astaan ayaa magaalada Hargeysa lagu xiray 17- bishii Juulaay ee sannadkan.
Maxamed Cabdiwali oo ka tirsan mas’uuliyiinta Astaan ayaa BBC Somali u sheegay: “Innaga markaan ka hadleyno xarigiisa sida uu ku bilowday aad ayay u foolxumeed, nin mas’uul ah oo magaalada wax ku soo kordhiyay.”
Xarigga maamulaha guud ee Astaan TV, Cabdimanaan, waxaa ka hadlay wariyeyaal, iyo dad kale oo siyaasiyiin ay ka mid yihiin.
Waxyaabaha uu ku eedeysan yahay ayaan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo shaacin, balse waxaa hadda soo baxaya warar sheegaya in maxakamad ku taalla Jamhuuriyadda Somaliland ay “laashay eedaha loo soo jeediyay”.
Waaxda dacwadda ku oogtay Cabdimanaan kama aysan hadlin xariggiisa. Balse waxaa ka hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta Somaliland.
Afhayeenka xisbiga mucaaradka ah ee Waddani, Barkhad Jaamac Batuun, oo bishii Ogost hadlay wuxuu warbaahinta u sheegay:
“Waxaa magaalada Hargeysa wakhti aan sax aheyn lagu xiray milkiilaha Astaan TV waxaa lagu xiray meelaan sax aheyn, wuxuu xirnaa muddo aan sharci ahayn, cidda xirtay sifo sax ah oo sharci ah kumey xirin; maxkamad uu xaq u lahaana waxaa la geeyay wakhti aan sax aheyn,” sidaas waxaa yiri Barqad Jaamac Batuun afhayeenka Xisbiga Waddani.
Mas’uuliyiinta Astaan TV ayaa hadda rajo ka muujinaya in Cabdimanaan uu dib u helo xoriyadiisa maadaama ay maxakamaddu sheegtay in “waxyaabaha lagu eedeyay ay meesha ka saartay”.
Qaar ka mid ah shaqaalaha Astaan ayaa dalbaday in xuriyaddiisa loo soo celiyo